Home Somali News Somalia: Al-Shabaab oo weerar ku qaadey laba Hotel oo Muqdisho ku yaala
Qaar ka tirsan Ciidamadda al-shabaab ayaa weerar ku qaadey laba Hotel oo ku yaala Jidka Makka al-Muklaramah, waxaana dableyda weerarka qaadey u suurta gashey in ay mid kamid ah Hoteelada ka dagaalamaan saacado dhawr ah.
Weeraradan ayaa bilowdey xiligii dadka sooman u fadhiyeen anfurka.
Hotel Siyaad iyo Hotel Weheliye ee weerarka lagu qaadey ayaa caan ku ah in ay degaan Xildhibaano iyo dad kale oo Dowladda u shaqeeya, sidoo kale waxaa dega dadka qurba joogta ah ee dalka dib ugu soo noqdey.
Warar hordhac ah ayaa sheegaya in weerarka Hotel Weheliye ka dhacay ay ku nafwaayeen dad ka badan 10 qof, kuwaas oo u badan dad ku sugnaa Hotelka banaankiisa iyo qaar kamid ah shaqaalaha, Wararku waxay sheegayaan in Mulkiilaha Hotelka Ciise Weheliye Maalin iyo Xildhibaano deganaa Hotelka aysan waxba ku noqon weerarka.
Wasiirka Amniga Cabdirisaaq Maxamed ayaa sheegey in weerarkii Hotel Weheleiye la soo afjarey isla markaana lagu diley 7 ka tirsan malayshiyada al-Shabaab, Wasiirku wuxuu yiri ma jirto cid shacab ah oo wax ku noqotey weerarka!,
Dhanka kale koox kale oo hubeysan ayaa weerar ku qaadey Hotel Siyaad oo ku yaala meel ku dhaw Suuqii hore ee Ceelgaabta, waxaana la sheegayaa in kooxdu gudaha u galeen Hoteelka, isla markaana u suurta gashey in ay ka diriraan muddo ka badan saddex saacadood.
Lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashey weerarka Hotel Siyaad, waxaana wararkii u danbeeyey sheegayaan in weli halkaas laga maqlaayo rasaas la is dhaafsanayo xilliga Muqdisho markuu ahaa 21:00
Ururka al-Shabaab ayaa masuuliyadda weerarkan dhabarka u ritey oo sheegay in ay ka danbeeyaan iyagu.
Malayshiyada al-Shabaab ayaa horey caan ugu ahaa weerarada lagu qaado Hoteelada ganacsiga ee ay degaan dadka rayidka ah iyo weliba masuuliyiinta Dowladda, Waxaana ugu danbeeyey Weerarkii ka dhacay Hotel Maka Al-Mukaramah oo ay ka dagaalameeyeen saacado badan.
Jidka Makka al-Muklaramah